दसैं-तिहारमा कुन मोटरसाइकल किन्दा कति छुट ? पूरा विवरण हेर्नुस - Purbeli News
दसैं-तिहारमा कुन मोटरसाइकल किन्दा कति छुट ? पूरा विवरण हेर्नुस
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ समय: १८:२७:२०
काठमाडौं / सबै उमेर समूहका लागि ‘फिट’ हुने विशेषताले मोटरसाइकल र स्कुटरको लाेकप्रियतासँगै व्यापार पनि बढ्दो छ । दसैं-तिहारको अवसर पारी सवारी विक्रेताले विभिन्न अफर ल्याउने भएकाले माेटरसाइकल तथा स्कुटर किन्न दसैंकै अासपासमा भीड लाग्ने गरेको छ ।
दसैं-तिहारमा नयाँ बाइक चढ्न चाहने ग्राहक लक्षित गरी मोटरसाइकल कम्पनीहरुले पनि आर्कषक बिक्री योजना ल्याएका छन् । बिक्रेता कम्पनीले नगद छुट, हात खाली नहुने स्क्र्याच कुपन, टुर प्याकेज र नगद योजना सार्वजनिक गरेका छन् । यसले ग्राहकलाई लोभ्याएको छ भने बाइकको व्यापार पनि बढेको छ ।
नेपाली बजारमा अहिले १ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने बाइक/स्कुटर खरिदबिक्री हुने गरेको छ । केही माेटरसाइकल बिक्रेताले सार्वजनिक गरेका बिक्री योजना यसप्रकार छन् ।
नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले दसैं र तिहार लक्षित ग्राहक योजना ल्याएको छ । ‘विजय यात्रा’ नाम दिइएको यो योजनामा यामाहा ब्रान्डका मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गर्ने ग्राहकले कम्तीमा ७ हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म नगद छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी, हरेक हप्ता हुने लकी ड्रमार्फत एक जनाले ब्रान्ड न्यु यामाहा आर थ्री ३ जित्न सक्ने छन् ।
यामाहाका मोटरसाइकल र स्कुटर ‘ब्लु कोर’ इन्जिनजडित छन् । यामाहाको आर र एफजी सिरिजमा अत्याधुनिक फ्युल इन्जेक्सन (एफआई) प्रविधि जडान गरिएको छ जसले पर्फमेन्स बढाउनुका साथै इन्धन खपत घटाउँछ । यामाहाका बाइकहरुमा माइलेज बढी दिने गरेको छ ।
बाइक तथा स्कुटरका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता स्याकर ट्रेडिङ प्रालि हो । कम्पनीले पनि दसैं, तिहार तथा छठ पर्व लक्षित गरी अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले एक लाख ९५ हजार ९ सय रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्मका बाइक तथा स्कुटरमा स्क्र्याचकार्ड अफर ल्याएको छ । जसमा ४ हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जित्न सकिने बताइएको छ । पाँच वर्षसम्मका लागि १४ पटकको सर्भिस फ्रि र पाँच वर्षसम्म पार्टपुर्जा खरिदमा १० प्रतिशत छुट अफर हाेन्डाले ल्याएको छ ।
यसैगरी, एक्स आर १५० र १९० सीसीको बाइक खरिदमा भने सिधै १० हजार नगद छुट योजना ल्याएको छ । साथै कम्पनीको सबैभन्दा महँगा बाइक सीबीआरमा भने २० हजार नगद छुट अफर सार्वजनिक गरेको छ ।
हिरो बाइक तथा स्कुटरको लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जनरल मार्केटिङ प्रालि हो । कम्पनीले दसैं, तिहार तथा छठ लागि लक्षित गर्दै माेटरसाइकल खरीदमा ६ हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जित्न सिकिने अफर सार्वजनिक गरेको छ ।
स्कुटर खरिदमा ८ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जित्न सकिने छ । नेपाली बजारमा हिरोको एक लाख ७१ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि ३ लाख ७६ हजार मूल्य सम्मका बाइक तथा स्कुटर पाइन्छ ।
नेपालका लागि बजाज मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलास चन्द्र एन्ड कम्पनी हो । बजाजको पल्सर मोटरसाइकल नेपालमा बढी लोकप्रिय छ । बजाजले पनि दसैं, तिहार तथा छठ लक्षित गर्दे अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले प्रत्येक बाइकको खरीदमा हात खाली नहुने गरी न्यूनतम ६ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जित्न सक्ने योजना ल्याएको बताएको छ ।
साथै हरेक साता ‘लक्की ड्र’मार्फत ‘पकेट फुल मनी’ योजना ल्याएको छ । जसअन्तर्गत एक मिनेटसम्म गोजीमा जति रकम हाल्न सक्छन्, त्यति नै रकम पाउनेछन् । नेपाली बजारमा बजाजका झन्डै एक दर्जन भेरियन्टका बाइक उपलब्ध छन् । न्यूनतम एक लाख ६३ हजार ९ सय रुपैयाँदेखि पाँच लाख ८९ हजार ९ सय रुपैयाँसम्मका बाइक नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् ।
टिभीएयस र अपाचे
टिभीएस र अपाचे बाइक तथा स्कुटरका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा अटो ग्रुप हो । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको दसैं तथा तिहार लक्षित अफरमा सबै बाइक तथा स्कुटर खरिदमा नगद ७ हजार छुटको योजना ल्याएको छ । यसका साथै हरेक दिन लक्की ड्र मार्फत् १० जनालाई १० हजार र एक जनालाई एक लाख रुपैयाँ अफर पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाली बजारमा न्यूनतम एक लाख ७५ हजार रुपैयाँदेखि ७ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्मको २० भेरियन्टको बाइक तथा स्कुटर कम्पनीले बिक्री गर्दै आएको छ ।
सुजुकी बाइकका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता विशाल ग्रुप हो । ग्रुपले दसैं, तिहार तथा छठलक्षित अफर अन्तर्गत स्कुटर खरिदमा १० हजार नगर र बाइक खरिदमा ८ हजार नगद छुट प्राप्त गर्ने अफर सार्वजनिक गरेको छ । लक्की ड्र मार्फत जापान टुरको योजना समेत ल्याएको छ ।